🥇 2022 ခုနှစ် မေလ၏ အကောင်းဆုံး FCA ထိန်းညှိပွဲစားများ | ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန်2ကို လေ့လာပါ။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24 မေလ 2022 အချက်အလက်စစ်ပြီးပြီ
စာရေးချိန်တွင် နောက်ဆုံးပေါ် အချက်အလက်များကို ကိုယ်စားပြုရန် ဤစာသားကို အမှန်ခြစ်ထားသည်။
အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ဘဏ္theာရေးကျင့်ထုံးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (FCA) အကြောင်းကြားပြီးပြီ။ သို့သော်သင်၌မရှိလျှင် FCA သည်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဗြိတိန်အကျိုးတူကုမ္ပဏီ ၆၀,၀၀၀ ခန့်ကိုတက်ကြွစွာထိန်းချုပ်သည်။
FCA မပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်ခိုးယူခြင်း၊ ငွေခဝါချခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများမှဤအကာအကွယ်မရရှိနိုင်ပါ။ FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများကိုသာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ငွေသာမကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပါကာကွယ်ပေးသည်။
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် UK ရှိကုန်သွယ်ရေးမြင်ကွင်းတွင်အကောင်းဆုံး FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများကိုထုတ်ဖော်ကြေငြာမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းပွဲစားကုမ္ပဏီများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလက်ဖောင်းမည်မျှအသုံးပြုရလွယ်ကူကြောင်းနှင့်ဆိုက်တွင်မည်သို့သောဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများကမ်းလှမ်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သိက္ခာ၊ သက်ဆိုင်သည့်အခကြေးငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုမတူကွဲပြားမှုစသည့်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာပါမည်။
FCA ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်Aprilပြီ ၁ ရက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်၎င်းသည်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအသစ်ဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်သောကြောင့်သင့်အားခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာ FCAs သည်ယခင်ဘဏ္theာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအာဏာပိုင် (FSA) သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဘဏ္UKာရေးနယ်ပယ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာဘဏ္principalာရေးနယ်ပယ်တွင်အဓိကစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူဖြစ်သည်။
FSA ကိုသီးခြားအာဏာပိုင်နှစ်ခုခွဲခွဲသည်အထိဖြစ်သည်။ FCA နှင့် Prudential Regulation Authority (PRA) တို့ဖြစ်သည်။ ချေးငွေဆိုင်ရာသမဂ္ဂများ၊ ဘဏ်များ၊ အာမခံထားသူများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများစသည်တို့ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်ဌာနဖြစ်သည်။
FCA သည်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါယူကေတွင်ဘဏ္conductာရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ FSA အပိုင်းအစငယ်များဖြစ်သည့်အကြွေးတွင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဘဏ္Financialာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်စျေးကွက်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၂၀၁၂ ဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအက်ဥပဒေသည်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်များအကြားအဓိကဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်းသည်ဘဏ္spaceာရေးနေရာပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်၎င်းအားမည်သို့ထိန်းညှိခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ FCA ၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာဘဏ္andာရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပိုမိုလုံခြုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတိုင်းအတွက်မျှတပြီးပွင့်လင်းမြင်သာသောစျေးကွက်ဖြစ်သည်။
FCA မရှိရင်ဒီကနေ့စျေးကွက်နဲ့စီးပွားရေးဟာအတူတူအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းအဖွဲ့သည်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်၏သမာဓိကိုခိုင်မာစေရုံသာမကဖောက်သည်များကိုကာကွယ်ပေးရုံသာမကစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
FCA သည်ပွဲစားများအတွက်မလွယ်ကူပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်လနှင့်လများအကြာတွင်ခန္ဓာကိုယ်၏စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်အတွက်ကွင်းဆက်များနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ခုန်ချခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပွဲစားတစ် ဦး FCA လိုင်စင်ရရှိရန်အဘို့, သူတို့ကသူတို့ကစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးရဲ့စည်းမျဉ်းများနှင့်အလေ့အကျင့်ကုဒ်များကိုလိုက်နာနိုင်ကြောင်းပြသရပါမည်။ ထိုအရာများအရဗြိတိန်ဥပဒေအရအပြည့်အဝလည်ပတ်ရမည်။
ဆိုလိုသည်မှာပွဲစားသည်တာ ၀ န်ခံမှုရှိရမည်ဖြစ်ပြီးတင်းကြပ်သောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာနေသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအားလိုင်စင်မပေးမီပွဲစားများမှလိုက်နာရန်လိုအပ်သည့်စာရင်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကုန်သည်များကဂရုမစိုက်ပါကအလွန်မြင့်မားသောသြဇာသည်အကြွေးကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုလျှို့ဝှက်ချက်မရှိပါ။ အကယ်၍ အလွဲသုံးစားပြုခဲ့လျှင်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။ (ဥပမာ ၁: ၁၀၀၀) အင်မတန်မြင့်မားသောသြဇာကိုကမ်းလှမ်းသောအွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် FCA သည်လက်လီဖောက်သည်များအတွက်ကန့်သတ်ချက်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုနောက်ခံမှလာသည့် 'ပျမ်းမျှဂျိုး' ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုဆိုလိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ CDF ကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများသည် ၁: ၂ မှ ၁:၃၀ ကြားရှိသြဇာကိုသာကမ်းလှမ်းသည်။ ကုန်သည်၏အနေအထားကို (CFD အကောင့်အရ) ဆက်လက်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့်ပမာဏ၏ ၅၀% အောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။ ဤကိစ္စတွင်အရစ်ကျကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်၏ရာထူးကိုချက်ချင်းပိတ်ထားရသည်။
ကုန်သည်သည်အကောင့်တစ်ခုအတွက်မည်သည့်နေရာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါစေ FCA ပွဲစားများအားလုံးသည်စင်မြင့်သို့လက်မှတ်ထိုးထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရမည်။ ဤသည်မှာမှတ်ပုံတင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုမပေးအပ်ဘဲစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားများကိုသင်မ ၀ င်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
AML မူဝါဒ၏ရည်မှန်းချက်မှာမည်သည့်သံသယဖြစ်ဖွယ်သောငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ငွေခဝါချခြင်း၊ လုံခြုံရေးကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်လိမ်လည်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ပွဲစားများသည်တရား ၀ င်စွန့်စားမှုအခြေခံမူဝါဒများနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏စစ်ဆေးမှုများကိုဥပဒေအရလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရှုထောင့်နှင့်အတူသူတို့သည်ဖောက်သည်များ၏ဂရုပြုမှုနှင့်“ ဖောက်သည်အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်း” အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၏အရေးပါမှုကိုလည်းနားလည်ရမည်။ FCA ပွဲစားတစ် ဦး ချင်းစီသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစစ်ဆေးပြီးဖော်ထုတ်ပြီးထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုခန္ဓာကိုယ်သို့လွှဲအပ်ရမည်။
ပွဲစားများသည် FCA ၏အတည်ပြုချက်ကိုရယူရန်အတွက်ကွင်းကြီးများကိုဖြတ်ကျော်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောအရာများစွာအနက်မှနှစ်ပတ်လည်စာရင်းစစ်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပွဲစားများသည် FCA ကိုပိုင်ဆိုင်သောအရင်းအနှီးအားလုံးနှင့် FCA ကိုအကြောင်းကြားရမည်။ 'ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ' ဥပဒေအရပလက်ဖောင်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာတင်ပြရန်စာရင်းစစ်စာရင်းစစ်ကိုငှားရမ်းရမည်။ CASS ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကိုလည်း FCA မှတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှုခင်းသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီးပွဲစားများသည်ဥပဒေနှင့်အညီလိုက်နာကျင့်သုံးမှုအတွက်ယခင်ကထက် ပို၍ တာ ၀ န်ခံမှုရှိသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်သင်သည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သာသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများသည်ရှင်းလင်းစွာနှင့်ပွင့်လင်းစွာပေးဆောင်ရမည့်အခကြေးငွေများအားလုံးကိုအပြည့်အဝထုတ်ဖော်ရမည်။ အထူးသဖြင့် CFD ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအခကြေးငွေများသည်ပွဲစားများအတွက်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ပေးဆောင်ရမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့် 'သတင်းအချက်အလက်အသိပေးချက်' ပါ ၀ င်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် 'ဖောက်သည်အတည်ပြုခြင်း' ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များကဖြည့်စွက်ရမည့်ပုံစံဖြစ်ပြီးယခင်ကဖော်ပြခဲ့သော 'အသိပေးအကြောင်းကြားစာ' ကိုသူတို့နားလည်ပြီးနားလည်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
FCA စည်းမျဉ်းပွဲစားများအတွက်ခိုင်မာသောလုံ့လဝီရိယရှိရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတွင်တတိယပါတီကုမ္ပဏီများနောက်ခံစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏လိုက်နာမှုမူဘောင်ကိုလေ့လာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ FCA စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစားများသည်အဆက်မပြတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အပြင်ဘဏ္recordsာရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းအားလုံးကိုအဖွဲ့မှစစ်ဆေးရမည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပုံရသည်။ ဤကိစ္စတွင်နှင့်ခြွင်းချက်မရှိဘဲပွဲစားအားတရားဝင်တိုးချဲ့ထားသောလုံ့လဝီရိယရှိသည့်အစီရင်ခံစာထုတ်ရန်တရားဝင်လိုအပ်သည်။ FCA ပွဲစားတစ် ဦး ချင်းစီသည်ရန်ပုံငွေများကိုမည်သည့်နေရာမှရရှိသည်ကိုသက်သေပြရန်တာဝန်ရှိသည်။
မည်သည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီမဆိုဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများအားကုမ္ပဏီ၏အမည်ရှိမည်သည့်အကောင့်များနှင့်မဆိုတရားဝင်ခွဲထုတ်ရမည်။ ဤစည်းမျဉ်းသည်သင်၏ငွေကိုတရားမ ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးမှထွက်သွားသည့်အငြင်းပွားမှုတို့မှကာကွယ်ရန်တည်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း၊ FCA သည်ကုန်သွယ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအားအလွှာပေါင်းစုံမှကာကွယ်မှုပေးပြီးအွန်လိုင်းပွဲစားများကိုသံလက်သီးဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည်။ FCA ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည်ဤအဖွဲ့အစည်းမှချမှတ်ထားသောဘဏ္marketာရေးစျေးကွက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ပြီးမကြာခဏစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ရန်ပုံငွေကာကွယ်မှုကြောင့်သင်၏ငွေများကို 'Financial Services Compensation Scheme' (FSCS) ကပေါင် ၈၅၀၀၀ အထိကာကွယ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်တစ် ဦးဖောက်သည်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသီးခြားရန်ပုံငွေဖြင့်အကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ဤအတိုင်းအတာသည်သင်၏အရင်းအနှီးကိုပွဲစားပလက်ဖောင်းမှမည်သည့်အမှားမဆိုနှင့်၎င်းပလက်ဖောင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောကုမ္ပဏီ၏ကြွေးမြီများမှကင်းဝေးစေသည်။
'ခွဲခြားရန်ပုံငွေများ' ကိုတစ်ခါတစ်ရံအလယ်အလတ်ပွဲစားတစ် ဦး ကဂရုစိုက်သည်။ သူသည်စီးပွားရေးမှထွက်သွားသည့်ပွဲစားပလက်ဖောင်းဖြစ်လျှင်သင်၏ငွေကိုသင့်အားပြန်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
အချို့သော FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုသာအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပြီးအခြားသူများကမူအရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ရရှိနိုင်သမျှအများဆုံးကုန်သွယ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကိုငါတို့စုစည်းထားပါတယ်။
တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေး UK သည်ရောနိုင်ငံတကာတွင်ပါရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းရန်အတွက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါလေလံ / မေးပါ ပျံ့နှံ့ စတော့ရှယ်ယာများရောင်းဝယ်ရာတွင်ဝယ်သူကပေးချေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်နှင့်ရောင်းသူကလက်ခံလိုသောအရာနှင့်ကွာခြားသည်။
ဤစျေးကွက်မှတစ်ဆင့်သင်သည်အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သကဲ့သို့လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း (LSE) နှင့် Alternative Investment Market (AIM) မှတစ်ဆင့်ရှယ်ယာများရောင်းချနိုင်သည်။ ဥပမာ HSBC သို့မဟုတ် AstraZeneca တွင် ၁ ခုသာ ၀ ယ်ရန်မလိုပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံအပိုင်းအစများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
အာကာသထဲတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်ပွဲစားများနှင့်ဆက်ဆံသော FCA ဝေစုအနည်းငယ်ရှိသည်။
အကြံပေးပွဲစားများ: ပွဲစားများကိုဤသို့သောအစုရှယ်ယာမျိုးကသင့်အားမည်သည့်ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်ကောင်းသည်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးသည်။ သင် ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေရောင်းသည်ဖြစ်စေသင်ဆုံးဖြတ်မည်သာဖြစ်သည်။
လိုသလိုပွဲစားများ: နောက်ပြန်ထိုင်လိုသောကုန်သည်များအတွက်၊ လိုသလိုပွဲစားသည်အသုံးဝင်သည်။ ဤပွဲစားသည်သင် ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်သော ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလုံး ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဤပွဲစားအမျိုးအစားနှင့်ဆက်နွယ်သောရှယ်ယာရောင်းဝယ်ခများကိုသတိပြုပါ။
Execution ပွဲစားများ ဤပွဲစားသည်သင်၏ညွှန်ကြားချက်ကို အခြေခံ၍ အမိန့်များကိုသာလုပ်ဆောင်ပြီးမည်သည့်အနှောင့်အယှက်မှမရှိပါ။
လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းက FCA ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားများအားဈေးပြိုင်ရန်လေလံဆွဲရာတွင်ကူညီပေးသည်။ အနိမ့်ဆုံးသည်အစဉ်အမြဲလေလံကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မည်, ခြားနားချက်ကို 'ပြန့်ပွား' 'ဖန်တီးပေးပါတယ်။ FCA စည်းမျဉ်းပွဲစားများကသင့်ဆန္ဒရှိသည့်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ခွင့်ပေးသည့်အတွက်ယင်းသည်သွယ်ဝိုက်ကြေးဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့သောကုန်သွယ်မှုသည်စတော့ရှယ်ယာများ၊ ငွေကြေးများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ညွှန်းကိန်းများကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောတူရိယာများ၏စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ စျေးကွက်ပေါက်စျေးတက်လာလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်သည် '၀ ယ်နိုင်သည်' သို့မဟုတ် 'ရှည်စွာသွားနိုင်သည်' ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်စျေးကွက်ကျသွားလိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်လျှင်၊ သင်သည် 'ရောင်း' သို့မဟုတ် 'တိုတိုသွား' နိုင်သည်။
CFD များနှင့်ကုန်သည်များသည်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ရန်မလိုပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် CFD သည်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီလိုက်နာရန်သင့်အားကူညီသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်သည်တိုတောင်းသော (သို့) ကြာရှည်သောဈေးနှုန်းများဖြင့်ဈေးနှုန်းအတက်အကျကြောင့်အမြတ်အစွန်းများရနိုင်သည်။ CFDs သည်ကုန်သည်များအားလည်းငှားရမ်းထားသောအဆောက်အအုံများကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
အရေးကြီးသည်မှာသင်သည် CFDs မှတစ်ဆင့် Amazon ၏အစုရှယ်ယာများမှကုန်သွယ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည် - ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုယူရန်မလိုအပ်တော့ပါ။
ကုန်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်အမြတ်ရရှိနိုင်ရန်ညွှန်းကိန်းများ၏စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်များစွာသောညွှန်းကိန်းများကိုကုန်သွယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောအညွှန်းကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ သင်ကရှယ်ယာများနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအညွှန်းကိန်းမဝယ်နိုင်ပါ။ အညွှန်းကိန်းများစွာသောပိုင်ဆိုင်မှုပေါင်းစပ်လှုပ်ရှားမှု၏ညွှန်းကိန်းဖြစ်ကြသည်။
ဤရွေ့ကားအညွှန်းကိန်းအမှတ်အခြေခံပေါ်မှာတိုင်းတာနှင့်လည်းကဲ့သို့သောရွှေ့။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ညွှန်းကိန်းများကိုတိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုမပြုနိုင်သည့်အတွက် ETFs၊ Futures သို့မဟုတ် CFDs များမှတဆင့်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤနည်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်တစ် ဦး ချင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်မလိုဘဲညွှန်းကိန်းပြောင်းလဲမှုကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ အညွှန်းကိန်းတစ်ခုစီသည်တန်ဖိုးကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်တွက်ချက်သည်။
ဤစျေးကွက်သည် ၂၄/၇ အထိရှိပြီးစတော့အိတ်ချိန်းတွင်ကုန်သွယ်ရန်အချိန်မရှိသောကုန်သည်များအတွက်အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သာကုန်သွယ်ရန်အလွန်အောင်မြင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအချို့ရှိသည်။ ဤစျေးကွက်တွင် 'ခက်ခဲသောကုန်ပစ္စည်းများ' နှင့် 'ပျော့ပျောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများ' ရှိနေသည်။
'နူးညံ့သော' ကုန်ပစ္စည်းများတွင် -
အောက်ပါကုန်စည်များကို“ ခက်ခဲသော” ကုန်ပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ရှေ, ကြေးနီ, ငွေ, Aluminum.
ဤပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းမပြုမီလက်တွေ့ဘ ၀ စျေးကွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းသည်သင်၏အစုစုကိုတိုးချဲ့ပြီးသင်၏စွန့်စားမှုများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Cryptocurrencies အကြောင်းကိုမကြားဖူးသူအနည်းငယ်သာရှိသည်။ cryptocurrency အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်ကုန်သည်များသည်ငွေကြေးစျေးနှုန်းတက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရမည်။ အားလုံးသည်နောက်ခံငွေကြေးများပိုင်ဆိုင်ရန်မလိုပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်အခြေခံဒင်္ဂါးများကိုပိုင်ဆိုင်လိုပါက FCA စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် CFD ပွဲစားမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
FCA ပွဲစားသရုပ်ပြအကောင့်တွင် cryptocurrencies ကို ၀ ယ ်၍ ရောင်းဝယ်ရန်သွားသင့်သည်။ ထိုသို့ပြုရာတွင်သင်စမ်းကြည့်နိုင်သည် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ ၁၀၀% အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။
ကုန်သည်တစ် ဦး သည်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်လိုပါကအမှာစာပေးရန် FCA Forex ပွဲစားသို့သွားသည်။ ဤသည်က GBP / USD ကဲ့သို့သောငွေကြေးအတွဲများကိုရောင်းရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရိုးရာ Forex စျေးကွက်နေရာသည်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီနှင့်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သော FCE စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများကသင့်အားစနေ၊ ဤသည်ကို 'ကုန်သွယ်မှုကုန်ဆုံးချိန်' အဖြစ်လူသိများသည်။
Forex အတွဲများကိုအမျိုးအစား ၃ မျိုးခွဲခြားထားသည်။ အရွယ်မရောက်သေးသူနှင့် exotics ။
Major pairs are the most liquid and in demand, such as EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ – to nameafew. These pairs have low spreads and can be traded the majority of the time.
When it comes to minors, they are often called cross-currency pairs and never include the US Dollar. Examples include GBP / JPY, EUR / GBP, CHF / JPY.
Exotic pairs often come withahigher spread. This is because they are not traded as often. Exotic pairs include EUR/ကြိုးစားပါ။, USD / HKD, GBP / ZAR.
ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းမျိုးစုံအပြင် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ စျေးနှုန်းဇယားများနှင့် စျေးကွက်သုတေသနပြုခြင်းပါရှိသော ပလပ်ဖောင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကောင်းပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Forex စျေးကွက်သို့ စတင်လေ့လာသူဖြစ်ပါက eToro သည် စဉ်းစားရန်ကောင်းမွန်သော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး FCA ပွဲစားများကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ပထမ ဦး စွာနှင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ပွဲစားသည်အပြည့်အဝတရား ၀ င်မှုရှိစေရန်သေချာစေသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင့်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ရှိနေသောကြောင့် FCA နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ယူကေဥပဒေအရလည်ပတ်နေတဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာသစ္စာပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်များစွာသောလိမ်လည်လှည့်စားသောကုမ္ပဏီများကနေရာတစ်ခုတွင်လုံခြုံစိတ်ချရသောကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးနေသည်။ ဤအချက်ကိုကြည့်လျှင် ၂၀၂၀ တွင်အကောင်းဆုံး FCA နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပွဲစားများကိုရှာဖွေသည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုစုခဲ့သည်။
ကျဆင်းခြင်းမပြုမီ၊ သင့်အားမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းမည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်သည် Forex ကိုယခုအချိန်တွင်သာရောင်းဝယ်လိုသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအမျိုးမျိုးကိုပေးသည့် FCA အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ကောင်း၏။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ပွဲစားလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုခေါင်မိုးတစ်ခုအောက်၌ရှိသည်။ နောင်တွင်သင်၏အစုစုကိုထည့်သွင်းလိုပါက၎င်းသည်သင့်ကိုအခြားပွဲစားပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမှသက်သာစေသည်။
ပွဲစားတစ် ဦး ချင်းစီသည်အခကြေးငွေနှင့်ပတ်သက်လျှင်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကုန်သည်များအနေဖြင့်ကော်မရှင်အခကြေးငွေမယူသည့်ပလက်ဖောင်းများရှိသည်။ ထိုအခါကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောရာခိုင်နှုန်းကိုအခကြေးငွေပေးသောအခြားသူများလည်းရှိသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မှာဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသော FCA ပွဲစားတစ် ဦး နှင့်သင်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကိုသင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်များသောအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီ၏ပြောင်းလဲနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ပွဲစားကုမ္ပဏီတခုကိုကုန်သွယ်မှုအတွက်ငွေ ၂ ပေါင်ပေးရမည်။
သင့်အတွက်သတင်းကောင်းမှာဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားအများစုသည်သင့်အားကော်မရှင်တစ်ပြားမှမပေးဘဲကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဲဒီအစား, အားလုံးအခကြေးငွေပြန့်ပွားသို့ built နေကြသည်!
မကြာခဏသတိမမူမိသော်လည်းအမှန်တကယ်အရေးကြီးသည် - ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံမှုသည်သင့်အတွက်သင့်တော်သောပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒီမှာသော့ချက်စာလုံး အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။။ အကောင်းဆုံးကတော့သင်ဟာဖောက်သည်တွေကိုတစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီနဲ့တစ်ပတ် ၇ ရက်ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပွဲစားပလက်ဖောင်းတစ်ခုလိုချင်တယ်။ မင်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ပွဲစားကမင်းကိုကူညီဖို့ရှိမယ်ဆိုတာမင်းသိချင်တယ်။
အကောင်းဆုံး FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများသည်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း၊ အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်းနှင့်အဆက်အသွယ်ပုံစံစသည့်ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုရွေးချယ်မှုများစွာကိုပေးသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပွဲစားတစ် ဦး ရှိခြင်းသည်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုကြည့်ရှုရန်အပြင်အခြားကုန်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာသင်၌သင်အသုံးပြုလိုသောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်တစ်ခုရှိပါကနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများမလုပ်မီပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိသင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
ငွေသွင်းသည့်အချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး - သင်၏သိုက်အားချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ပွဲစားကိုသင်အလိုရှိသည်။။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဟာကပွဲစားတစ် ဦး ချင်းအပေါ်မူတည်ပြီးသင်ရွေးချယ်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ငွေသွင်းပြီးချက်ချင်းကုန်သွယ်လိုပါက e-wallets နှင့် debit / credit cards ကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာများသည်များသောအားဖြင့်အလျင်အမြန်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
ပွဲစားများရွေးချယ်ရာတွင် 'ပြန့်ပွားခြင်း' သည်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်ဖြစ်သည်။ ဒါကရောင်းဈေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရဲ့ ၀ ယ်ဈေးနဲ့ကွာခြားချက်ပါ pips).
ပြန့်ပွားခြင်းသည်သင်မည်မျှအမြတ်အစွန်းရနေသည်ကိုခြားနားစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ EUR / USD ပြန့်ပွားမှုသည် ၄ ​​စက္ကန့်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ သင်၏ပင်ရင်းကိုချိုးဖျက်ရန်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အနည်းဆုံး ၄ မှတ်ဖြင့်တိုးရမည်။
မည်သည့် caliber ကုန်သည်အတွက်မဆိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာအချို့ရှိသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည်စျေးကွက်အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောပညာရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကိရိယာများကိုမကြာခဏစာရင်းပြုစုထားသည်။
တိုက်ရိုက်နှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ဤအင်္ဂါရပ်သည်စျေးကွက်အတွင်းစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်သည်များကိုပြောပြသည်။ backtesting၊ နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဗျူဟာများပြုလုပ်ရာတွင်၎င်းသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်.
ဇယားများနှင့်အညွှန်းကိန်းများ - စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့်ဇယားများမှတဆင့်ပုံဖော်လေ့ရှိသည်။
အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှု: ဤသည်မှာကုန်သည်အားလုံး၏လက်ဖက်ရည်ခွက်မဟုတ်သကဲ့သို့အချို့ပွဲစားများသည်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်များကိုထောက်ပံ့သည် ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး.
အမိန့် Execution protocol ကို: The best broker sites will execute your order within seconds, even milliseconds. This depends on the kind of trading strategy used (i.e. automated) and price sensitivity.
တတိယပါတီကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ၄ င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်မြင်သာစေရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပွဲစားတစ် ဦး ထက်ပိုပြီးကုန်သွယ်မှုပြုရန်အသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်သီးခြားလွတ်လပ်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားပါကသင်၏ပွဲစားကမည်သည့် platform ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
ဝေးအားဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံးကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ် MT4။ ဤတတိယပါတီဆော့ဝဲသည် FCA စည်းမျဉ်းပွဲစားများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ MT4 သည်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများနှင့်ဇယားဆွဲရန်ကိရိယာများကိုအပိုဆောင်းပေးသည့်အပြင်သင့်အားအလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်တစ်လုံးတပ်ဆင်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။
သင့်တွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုစိတ်ထဲထားရှိပါသလား၊ သို့မဟုတ်အသစ်ဖွင့်ပြီးရွေးချယ်စရာများအတွက်ဖွင့်ပါဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အကောင့်များရရှိနိုင်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူပါ။
အချို့သောအွန်လိုင်း FCA မှထိန်းချုပ်သောပွဲစားများသည်ကွဲပြားသောအကောင့်ရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည်။ ဥပမာ nano (0.001), micro (0.01), mini (0.10) နှင့် standard (1.00) account ။ အကယ်၍ သင်သည်မိုက်ကရိုအကောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်၊ ပွဲစားများစွာသည်ဤအကောင့်များကိုအမှန်တကယ်မကြေငြာသော်လည်း၎င်းပမာဏအနည်းငယ်ကိုရောင်းဝယ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
အစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှု၏နောက်လိုက်များအတွက်အချို့သော FCA မှထိန်းချုပ်သည့်ပွဲစားများသည်အစ္စလာမ်အကောင့်များကိုပေးသည်။ ဤအကောင့်များကိုရှရီယာဥပဒေအရလိုက်နာရန်အဆင်ပြေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အစ္စလာမ့်အကောင့်ကိုအသုံးပြုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အတိုးနှုန်းကိုလုံးဝမပေးဆောင်ကြပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤကဲ့သို့သောအကောင့်အမျိုးအစားလိုအပ်ပါကသင်၏အကောင့်လိုအပ်ချက်များကိုသူတို့လိုက်လျောညီထွေရှိမရှိကြည့်ရှုရန် FCA ပွဲစားကိုမေးမြန်းသင့်သည်။
ယနေ့ FCA Regulated ပွဲစားနှင့်အတူစတင်ပါ
ယခုတွင်သင်သည် FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်အရာအားလုံးသိပြီ ဖြစ်၍ စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်သင်၌ယုံကြည်မှုရှိသည်ဟုခံစားရသော FCA ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်မတွေ့ပါကစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသော FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများကိုဤစာမျက်နှာတွင်နောက်ထပ်စစ်ဆေးနိုင်သည်.
ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သူများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါအဆင့် ၅ ဆင့်ပါလမ်းညွှန်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ၎င်းသည်ယနေ့ FCA ပွဲစားမှတစ်ဆင့်သင်စတင်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာသင်ရွေးချယ်ထားသော FCA အတည်ပြုပွဲစား၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင် 'sign up' စာမျက်နှာကိုရှာပြီးသင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်သင်၏အကောင့်အသစ်အတွက်စာရင်းသွင်းရန်ထူးခြားသောစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်မသွားမီ, သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားသည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ KYC (သင်၏ဖောက်သည် / ဖောက်သည်ကိုသိသော) စည်းမျဉ်းများအရ - FCA ပွဲစားများသည်သင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုတရားဝင်တောင်းဆိုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်၏ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေ၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုသမိုင်း / ဗဟုသုတ၊ စွန့်စားရမှုအပေါ်သည်းခံနိုင်မှုနှင့်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သို့) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူတစ်စောင် (ပြီးခဲ့သည့် ၃ လ) မှတရားဝင်သုံးစရိတ် (သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်) လိုအပ်သည်။ သင်၏အမျိုးသားအာမခံနံပါတ်ကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးသင်၏လစဉ်ဝင်ငွေများနှင့်သင်ကုန်သည်တစ် ဦး အဖြစ်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်၏အထောက်အထားကို (များသောအားဖြင့်ချက်ချင်း) အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ပွဲစားကသင့်အားသင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးသည်နှင့်သင်စင်မြင့်သို့ ပြန်၍ ငွေသွင်းနိုင်သည်။
ပွဲစားပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်သင်ရရှိနိုင်သောငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်သို့ရောက်သည့်အချိန်တွင်သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်အဘယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုစဉ်းစားရန်ကောင်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဘဏ်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းသည်နှေးကွေးသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင့်တစ်ခုမလုပ်မီပွဲစားများအတွက်အခကြေးငွေဇယားကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
4 Step: ထရေးဒင်း Start
စျေးကွက်စီးပွားရေးအခြေအနေတွင်အစားထိုးရန်သင့်အား 'စက္ကူရန်ပုံငွေ' ပေးလိမ့်မည်။ အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအတွက်ပင်သရုပ်ပြအကောင့်စက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မဟာဗျူဟာအမျိုးမျိုးကိုကြိုးစားဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လူသစ်များအတွက်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားကား အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရန်မက်ထရစ်များနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖုံးထားပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်သင်သိထားရမည့်အရာအားလုံးနှင့်လက်နက်ကိုင်ထားသင့်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးရည်မှန်းချက်များအကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းကိုရှာဖွေခြင်း၌ - အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် ကုန်သွယ်မှုတွင် စတင်သူဖြစ်လျှင် Etoro.com သည် သင်ရှာဖွေနေသော ပွဲစားဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည် USD 50 လောက်သာဖြင့် စတင်နိုင်ပြီး သေးငယ်သော အစုရှယ်ယာများနှင့်ပင် ရောင်းဝယ်နိုင်သည် (အသေးစားနှင့် မိုက်ခရိုစ့်များဟု ထင်သည်)။ ဤပလပ်ဖောင်းသည် မည်သည့်ကော်မရှင်ကိုမျှ အခကြေးငွေမယူဘဲ CFD များတွင် အမှန်တကယ်ပျံ့နှံ့မှုနည်းပါးသည်။
Etoro.com သည် LSE၊ NASDAQ၊ NYSE၊ TSE နှင့် SSE ကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသော စတော့စျေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးပါသည်။ ဤ FCA ပွဲစားသည် ESMA ထုပ်များအလိုက် လွှမ်းမိုးမှုကို ပေးဆောင်ပြီး ဘဏ်ငွေလွှဲမှု၊ ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်များနှင့် Skrill၊ NETELLER၊ Klarna နှင့် PayPal ကဲ့သို့သော အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များကို လက်ခံသည်။
အနိမ့်ဆုံးအပ်ငွေ 50 USD ပဲရှိပါတယ်။
eToro ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အားလုံးသည် USD ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ယခု Etoro.com သို့ ဝင်ကြည့်ပါ။
အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသောအစုအဝေးများရှိသဖြင့်မည်သူယုံကြည်ရမည်ကိုသိခြင်းသည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ FCA စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အဆင်မပြေပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများမှပေးသောအကာအကွယ်အဆင့်သည်ကုန်သည်များကိုပွဲစားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်မကင်းသောကြောင့်သင်၏ငွေကြေးများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ရလဒ်အနေနှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားများကိုသင်စစ်ဆေးသင့်သည်သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤစာမျက်နှာတွင်မဖော်ပြထားသောပွဲစားတစ် ဦး နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင့်အိမ်စာလုပ်ရန်အမြဲအရေးကြီးသည်။ ကော်မရှင်နှုန်း၊ ပြန့်ပွားမှုနှင့်ငွေသွင်း / ထုတ်ယူခတို့ပါဝင်သင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်သာကြံစည်နေပါကစျေးနှုန်းမြင့်မားသည့်ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်မထိုက်တန်ပါ။ နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မှာသရုပ်ပြအကောင့်များကိုအများဆုံးပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်မည်သို့လေ့လာရမည်ဆိုပါက၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုနှင့်အဆုံးတွင်အသုံးချခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၎င်းတို့သည်အမှန်ပင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် FCA ပွဲစားစာရင်းကိုချက်လက်မှတ်ဖြင့်ငွေသွင်းနိုင်ပါသလား။
FCA ပွဲစားတိုင်းသည်ဤကိစ္စနှင့်မတူပါ။ အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်ချက်လက်မှတ်ကိုလက်ခံသော်လည်းအချို့သည်ဒက်ဘစ် / အကြွေးကဒ်များ၊ e-wallets သို့မဟုတ် cryptocurrencies ကိုသာယူနိုင်သည်။ အမြဲတမ်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပွဲစားနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ။
ငါ FCA ပွဲစားတစ် ဦး မှ ID ကိုပေးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်
ဟုတ်တယ်။ ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများအရ FCA ပွဲစားသည် KYC ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်။ ရလဒ်အနေနှင့်၎င်းတို့သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီ client တစ်ခုစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရမည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ FCA ပွဲစားသည်ဖျက်သိမ်းလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်၏ပွဲစားကို FCA မှထိန်းချုပ်သောကြောင့်သင်၏ငွေကိုပွဲစားကုမ္ပဏီ၏ငွေနှင့်သီးခြားဖြစ်စေရန်ခွဲထားသည့်ရန်ပုံငွေများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ သင်၏ငွေကို FSCS မှ£ 85,000 အထိကာကွယ်သင့်သော်လည်းသင်၏ပွဲစားနှင့်သေချာစစ်ဆေးပါ။
၎င်းသည်သင်ကုန်သွယ်လိုသောပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ UK နှင့် EU ရှိသူများအတွက် ESMA မှပြverage္ဌာန်းထားသည့်သြဇာသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ဤဥပမာ၏ဥပမာမှာ ၁: ၂ တွင် cryptocurrency leverage ဖြစ်သည်
FCA သည် 'Financial Conduct Authority' ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်မျှတသောဘဏ္regulာရေးဈေးကွက်ကိုသေချာစေရန်ဗြိတိန်ရှိပွဲစားများအားလုံးကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။